အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သော သွေးကင်ဆာ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အောက်တိုဘာ 25, 2018 Professor Suradej Hongeng, M.D.
ရောဂါရှာဖွေမှုဆောင်ရွက်မှုပြုပြီးနောက် မောင်လေးဇေယျာလင်းထက်တစ်ယောက် သွေးကင်ဆာ ရောဂါရှိနေကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သွေးကင်ဆာရောဂါရှိနေမှန်းသိလိုက်ရတော့ မောင်ဇေယျာလင်းထက်မိခင်ဟာ အရမ်းစိတ်ပူခဲ့ရပြီးသားငယ်အတွက် ဆေးကုသမှုကို အကောင်းဆုံးပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုများပြုခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မိမိသားငယ်နှင့် ဆရာဝန်များကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ထားရှိကာ ဆေးကုသမှုကို ပြုပေးခဲ့ရာ မောင်ဇေယျာလင်းထက် သွေးကင်ကင်ဆာကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မောင်လေးဇေယျာလင်းထက် ကင်ဆာရောဂါရှိမှန်းဘယ်လို စတင်သိရှိခဲ့တာလဲ? အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ?
ကျွန်မအဲ့ဒီနေ့ကို အခုထက်ထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်မသားလေးရဲ့ အသက် ၂ နှစ်ပြည့်တဲ့ မွေးနေ့ပါ။ မွေးနေ့ပွဲလေးကျင်းပပြီးတဲ့နောက် ညပိုင်းကျတော့ သားလေးကသူ့ခြေဆစ်လက်ဆစ်တွေနာတယ်လို့ ပြောတယ်။ ၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာ သူခဏခဏဖျားတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်အမြဲဖျားတယ်။ သူဖျားတိုင်း ကျွန်မ တို့လည်းဆေးခန်းသွားပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးကို ဆေးခန်းပြပြီးရင် ကလေးက အဖျားကျသွားလိုက်.. အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ။ အဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်မတို့ကသားလေးကို သာမန်ဖျားတာပဲထင်ခဲ့တယ်။
သွေးကင်ဆာ ရှိမှန်းသိခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့ အသက် ၂ နှစ်ကျော်ကျော်လေးမှာပေါ့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေအဆစ်တွေကရောင်တယ်၊ အဖျားကလည်းအရမ်းကြီးတယ်၊ ဗိုက်ကြီးကလည်း အရမ်းကိုပူလာ တယ်။ အဲဒါနဲ့ကျွန်မတို့လည်း ညတွင်းကြီးပဲ ကလေးဆေးရုံကို အမြန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကလေးကို ရောဂါရှာဖွေခြင်းများ စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးက လက်ဆစ်တွေ ခြေဆစ်တွေရောင်နေ တယ်ဆိုတော့ ဓါတ်မှန်တွေ ၊ Scan တွေရိုက်ပါတယ်။ သားလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေလက္ခဏာ များက သွေးကင်ဆာ ပုံစံမျိုးကို သွားနေတယ်ဆိုတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သွေးကင်ဆာ ရှိနေမှန်းသိ လိုက်ရတာကတော့ သားလေးအသက် ၂ နှစ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ ကလေးဆေးရုံကို ဘယ်လို စတင်သိရှိခဲ့တာလဲ?ဘာကြောင့် ဒီ ဆစ်မီတဝေ့ ကလေးဆေးရုံကြီးမှာဆေးလာကုမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာလဲ?
သွေးကင်ဆာမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ပြန်ပျောက်ဖို့က…ပြန်မပျောက်နိုင်ဘူးလို့ပဲထင်တာပေါ့ …ကင်ဆာဆိုလို့ရှိရင်…ဟို….ဆုံးကျတာများတယ်လေ..အဲ့ဒီနောက် ကျွန်မတို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာပေါ့နော်… ဒေါက်တာရဲအောင်ရှိတယ်ရှင့်…သူကလည်းကျွန်မတို့ကို Recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်…ဒီမှာ ဆေးစစ်ကြည့်လိုက်ပေါ့……ဒီမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်..ဒီမှာ ကုလို့ရရင်လည်းကုပေါ့နော်…ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း…စစ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကို ရန်ကုန်မှာပြန်ပြီးကုချင်လည်းကုပေါ့နော်..သဘောပေါ့နော်…အဲ့လိုဆိုတာနဲ့..ကျွန်မတို့လည်းဒီကို ဘန်ကောက်ကိုရောက်လာတာ….
မောင်လေးဆေးကုသမှုခံယူနေခဲ့တဲ့အချိန် အမအတွေ့အကြုံလေးကို ဝေမျှပေးပါ။
ဒီမှာကတော့ အကုန်လုံးအစစအရာရာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့….ကျွန်မတို့ အတွက်က ..ဟို တခြားနိုင်ငံမှာလာကုရတဲ့အတွက်…ဘာသာစကားမှအစ… ဒါအပြင်…တခြားတခြား…ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကို တခါမှမရောက်ဖူးတဲ့အတွက်…အဆင်မပြေတာ ရှိမယ်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့..ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီကသူနာပြုတွေကကော…ကျွန်မတို့ ထင်ထားတာထက်ကို ပိုပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးရှိတယ်…ဆရာဝန်တွေကမှအစ…နားမလည်တာကို အကုန်လုံးရှင်းပြပေးတယ်။ ကျွန်မတို့သိချင်တာတွေ အကုန်လုံးကို ရှင်းပြတယ်….အဲ့လိုမျိုး..ဟုတ်ကဲ့။
မောင်လေးဇေယျာလင်းထက် ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကလေးများရဲ့ မိခင်များကို ဘယ်လိုအားပေးစကားပြောချင်လဲ?
အားပေးစကားကတော့ပြောချင်တယ်….အားပေးစကားပြောချင်တယ်ဆိုတာက …ဒါမျိုးကလေ..ကြုံတဲ့မိဘတွေက …ကြုံတဲ့အချိန်မှခံစားရတာ……
ဟို……..ဘယ်လောက်ထိခံစားရလည်းဆိုတော့…..အဲ့အချိန်ကို…….ရှင်းရှင်းပြောရရင်…. ပြန်လည်းမရောက်ချင်ဘူး…ပြန်လည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်….အဲ့ဒီကုသတဲ့…တစ်နှစ်ကလေ…ကျွန်မတို့အတွက်ကလေ… တကယ်ကိုအိမ်မက်ဆိုးပဲဒါပေမဲ့ …ယုံကြည်မှုရှိတယ်… ကိုယ့်ကလေးကို ယုံကြည်တယ်…ဒီကဆရာဝန်ကို…. ယုံကြည်တယ်။ အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်…ဆရာကြီးကလည်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ကို ကုပေးနိုင်တယ်ပေါ့…အဲ့လိုမျိုး…ကလေးကိုလည်းကျွန်မယုံကြည်တယ် …ကုသမှုပြီးလို့ရှိရင်..ကျွန်မတို့ဆီကို အကောင်းပတိအတိုင်းပြန်လာမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကို ကျွန်မတို့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်…နောက်ဆုံးမှာ အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်…မိဘတွေကို ပြောချင်တာကတော့….ကိုယ့်သားသမီးကို ယုံကြည်ပေးပါပေါ့နော်။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်…အဆုံးအစွန်အထိကို…ကုသပေးပါ။ အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်။ဟုတ်….အရာရာတိုင်းအဆင်ပြေသွားမှာပါ။
သွေးကင်ဆာရောဂါ – ရိုးတွင်းခြင်ဆီကုသမှုခံယူခဲ့သော မောင်ဇေယျာလင်းထက်
“ကိုယ့်ကလေးကိုယုံကြည်မှုရှိပေးပါ။ အရာရာတိုင်းဟာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ” ပါလို့ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့စဉ်အတွင်း မောင်လေးဇေယျာလင်းထက်၏မိခင် မလှိုင်းဖွေးစိုးမှ သူမကဲ့သို့ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ များကို မောင်လေးကဲ့သို့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကလေးများ၏ မိဘများအားပေးစကားပြောခဲ့သော ဗီဒီယို “
“ ရိုးတွင်းခြင်ဆီကုသမှုခံယူခဲ့သော မောင်ဇေယျာလင်းထက်၏ ရောဂါရှာဖွေကုသပုံများကို Professor Suradej Hongeng, M.D. (Pediatrics & Pediatric Hematology and Oncology) မှ ရှင်းပြဝေမျှပေးခြင်း”
ဟုတ် ဇေယျာ……..သူက ကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကို ရောက်လာတုန်းက…အဲ့ဒီအချိန်က သူရဲ့အသက်ကတော့ ၂ နှစ်ပါ။ သူရောက်လာတုန်းကဆိုရင်…. ဖြူဖတ်ဖြူရော်နဲ့ ကိုယ်အပူချိန်ကလည်းအရမ်းကိုမြင့်တယ်…အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ သွေးစစ်မှုကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ သွေးဖြူဥနဲ့ သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေ အလွန်မြင့်တာကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်..ပြီးတော့သူ့မှာ သွေးကင်ဆာ ရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တုန်းက သူ့အသက် ၂ နှစ်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့သူ့ကို Chemotherapy (ခေမိုဆေးသွင်းခြင်း) ဆေးကုသမှုဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ကာလပမာဏအတိုင်း အပြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့…သူ့ရောဂါအပြည့်အစုံက ( Acute Lymphoblastic Leukemia ) ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ သွေးကင်ဆာထဲကမှ အမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဆိုရင် ဒီ သွေးကင်ဆာကတော့ (Chemotherapy) ခေမိုဆေးသွင်းခြင်းကို တုန့်ပြန်ချက်ရှိသော ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။သူခေမိုဆေးသွင်း ပေးပြီးချိန်မှာဘဲ…သူ့ဆီမှာ အချို့သော ကင်ဆာအကျိတ် ကျန်နေသေးပါတယ်။ခေမိုရဲ့ ဆေးပမာဏမှာ နည်းပေမယ့်လည်း…..အဲ့သဘောက ပြန်ဖြစ်မယ့် ပမာဏ အလွန်မြင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေ့နဲ့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဘာကြောင့် အစားထိုးကုသရလည်းဆိုရင် ဒီရောဂါက ပြန်ဖြစ် မယ့် ပမာဏ အလွန်မြင့်လို့ပါပဲ။အဲ့အချိန်တုန်းက သူ့မှာတော့ ပြန်ဖြစ်တာမျိုး မတွေ့ရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုဖို့အတွက် အလှူရှင်သူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလှူရှင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ဖခင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ဖခင် (သို့မဟုတ်) မိခင်ဖြစ်သူအတွက် (Stem cells) ဆဲလ်လှူလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တွေရဲ့ ( HLA ) က ထပ်တူမညီကြလို့ပါ။ဒါပေမယ့် ဒီမှာကတော့ ကလေးရဲ့ ဖခင်နဲ့ (HLA) တော့ ထပ်တူမကျပါဘူး။တစ်ဝက်သာ ထပ်တူကျတာပေါ့ ၊ ဒါကို (Haploidentical) လို့ခေါ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ ဒီအစားထိုး မှုကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အစားထိုးကုသမှုက အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အချို့သော ဘေးထွက် ပြဿနာလေးတွေတော့ ရှိခဲ့သော်လည်းသူပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသပြီးသွားတာလည်း ၄ နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီး။သူ့မှာ သွေးကင်ဆာရောဂါနဲ့ လွှတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီး။သူအခု နေကောင်းကျန်းမာနေပါတယ်။သူက ခုဆိုရင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ပဲ အရွယ်ရောက်လာပါပြီး။အခုဆိုရင် သူကျောင်းပြန်တက်နေပါပြီး။
ရောဂါရှာဖွေကုသခဲ့ပုံနှင့် လူနာများကို အကြံပြုချက်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ယခုဆို ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သွေးကင်ဆာ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုသမှု အစီစဉ်အသစ် ရှိနေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ သွေးကင်ဆာ အတွက်ပေါ့လေ။ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှု ခံယူဖို့ လိုအပ်နေသူများအတွက်နဲ့အထူးသဖြင့် (Haploidentical) လိုမျိုးတွေ့ရှိရတဲ့ သူတွေအတွက်ပေါ့။သွေးကင်ဆာ ရောဂါမှ မကပါဘူး၊ အခြားသော ရောဂါပြဿနာများရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုး ကုသမှုလိုအပ်သူများအတွက်(Thalassemia) မျိုးရိုးလိုက်သွေးအားနည်းရောဂါ၊ (Aplastic Anemia) သွေးဖြူဥ၊ သွေးနီဥနှင့် သွေး မွှာဥ ထုတ်နည်းခြင်းနှင့် အခြားသော ရောဂါများကိုပါ ကုသနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးရောဂါများကတော့ သွေးရောဂါများ ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် လူနာရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသဖို့ လိုအပ်လျှင်ပြီးတော့ အလှူရှင်ရှာမတွေ့ခဲ့ရင်….(လှူမယ့်သူနဲ့ တစ်ဝက်သာ ထပ်တူညီမှု ရှိခဲ့သော်)ဖခင် (သို့မဟုတ်) မိခင်ဖြစ်သူက (stem cells) ကို လှူနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသခြင်းမှာ လူနာက ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှု ခံယူဖို့လိုအပ်လာလျှင်အမြန်ဆုံး ကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်လျှင် ကျန်းမာရေးရလဒ်ကောင်းကို ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီအလွန်ကောင်းမွန်သော ကုသမှုအစီအစဉ်ကို အဓိကထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို ကောင်းမွန်၍ အောင်မြင်သော (Haploidentical Transplants) ကုသခြင်းအစီစဉ်ကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကုသနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဖခင်ရော မိခင်ပါ (Stem Cells)ကို လှူပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ အလွန်အောင်မြင်တဲ့ ကုသမှုရလဒ်ရော ရှိနေပါပြီ။သွေးကင်ဆာရောဂါတင်မက အခြားသောရောဂါများဖြစ်သော…(Thalassemia) ရောဂါ (သို့မဟုတ်) (Aplastic Anemia) စသော သွေးအားနည်းရောဂါမျိုးများကို ပါ ကုသပေးသွားနိုင်ပါတယ်။